Ibhizinisi - Inc Incible Mag
Kungani Kufanele Ukhethe I-ATM Engenantambo
Ukuqala ngebhizinisi lakho le-ATM kungaba okuthokozisayo. Ama-ATM anemodeli yebhizinisi emangalisayo futhi elula. Ngokuqala ibhizinisi le-ATM njengosomabhizinisi, utshala imali emshinini wokuthengisa osebhizinisini lokuthengisa imali. Imali ayonakalisi noma…
Qala, Umqondo Omusha Kwezamabhizinisi
Ukuqalisa kuyindlela entsha yokuthuthuka nokwethulwa kwamabhizinisi nemikhiqizo, ngombono ofanele wosomabhizinisi abancane, ikakhulukazi emkhakheni wezobuchwepheshe obusha. Kususelwa emiqondweni efana "nomkhiqizo omncane osebenzayo" kanye "nokufunda okuqinisekisiwe" phakathi kokunye…
I-Api Abakhiqizi Bemboni Iyakhula Ngokushesha Eminyakeni Emibalwa Yokugcina
I-API imele ingxube yento noma into esetshenzisiwe ekukhiqizeni umkhiqizo wemithi. I-API futhi imele ingxenye esebenzayo noma emaphakathi ekudalweni edala umphumela oqondile ekuvikeleni, ekuhlaziyweni kwezifo, nasekwelapheni. Ngenkathi i-API iyingxenye ye…
Isidingo se-Oleoresin Paprika Siyanda Emakethe Yomhlaba Wonke
Umbiko uhlanganisa ukubikezela kanye nocwaningo ngemakethe yama-oleoresin ezingeni likazwelonke nelamazwe omhlaba. Ucwaningo lwezimakethe, izimakethe zohlelo lokusebenza ezibalulekile ezihlanganiswe ngaphansi kwalolu cwaningo lubandakanya ukudla nesiphuzo, i-flavouring ne-ejenti yokufaka imibala. Imakethe yama-Oleoresins ihlukaniswe ngomkhiqizo ne-paprika,…
Inqubo yokubheka eduze i-Steel Forgings Process India
Ukwakhiwa kwensimbi kungenye yezinqubo ezithandwayo zasendulo zokwakhiwa kwensimbi lapho izingxenye zensimbi ezifunwayo zakhiwa khona ngokusebenzisa umfutho owengeziwe noma ukushisa. Namuhla, inhloso iyafana kepha amasu aseshintshe ngokuphelele. Inqubo efanayo yokwakha yenziwa ngamathuluzi wakamuva futhi…
Izikhonkwane ezenziwe ngezifiso: Imiklamo Nemibala Emisha Emisha Ngabakhiqizi BaseNdiya
I-Boom emhlabeni wezentengiselwano iphinde yakhuthaza ukukhangisa emhlabeni wonke ngezitayela ezintsha nezikhiqizayo njengezikhwama, izikhonkwane, amapeni, amakepisi njll. Le mikhiqizo eyenziwe ngezifiso mhlawumbe iyisinqumo esihle kakhulu ukujabulisa amakhasimende. Ziphrintiwe ngegama leNkampani noma ilogo ngokuvamile. Koku…
Wenze Ngokugcwele Umcimbi Wakho Wenkampani Ozayo
Ezweni lapho ukubaluleka kobukhona be-inthanethi obuqinile kufanele lapho kukhulunywa ngezindaba zezinkampani, kungaba lula ukungalinaki iqiniso lokuthi ukuhlangana nabantu ubuso nobuso kusalokhu kusebenza kahle futhi kungakhanyisa okusha kunhlangano yakho. Njengo…
4 Amathiphu Osonkontileka Abafisayo
Uma ucabanga ukuba ngusonkontileka noma umphathi wezandla, iqiniso ukuthi udinga ukunakekela izinto ezimbalwa kuqala. Ngaleyo ndlela, uzoba sendleleni efanele yokwakha ibhizinisi elisebenzayo neliphumelelayo ngaphandle kokuthatha izingozi ezingadingekile. Kuya…
Iziphi Izinyathelo Okufanele Uzithathe Ukwenza Kalula Ukuhlela Kwabasebenzi?
Uma ungumphathi webhizinisi, kufanele ukuthi ubhekane nezingcindezi ezibangelwa ukuntuleka kwenqubo efanele yokuhlela abasebenzi. Ukuziphatha kwabasebenzi nakho kuthinteka kabi uma bengenalo uhlelo oluhambisana namakhono nezidingo zabo. Ukuqhubeka nokwenza isimo sibe nzima, i…
1 2 3 ... 27 Olandelayo